ကြည်ကြည်ရဲ့ဒိုင်ယာရီ: ကျွန်မနှင့် ခရီး (၁)
ကျွန်မနှင့် ခရီး (၁)
လွန်ခဲ့ပြီးသောနှစ်များက ကျွန်မ ဖီင်္ဂျီကျွန်း သွားတုန်းက အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခု ပြန်တွေးမိတိုင်း ပြုံးမိပါတယ်။
ကန်ဆိုင်းလေဆိပ်က နွေဆို၇င် ပင်လယ်သွားကြတဲ့ ခရီးသွားတွေ အတော်များသလို အားလုံးအားလုံးကလည်း မဲ လိုက်သမျှပြောင်နေတာ ကျွန်မနီးပါးပါပဲ။
ပြည်တွင်းက အိုကီနာဝါသာကျွန်းသာမရောက်ဘူးတဲ့ သူရှိရင်ရှိမယ် ဟာဝိုင်ယီ ကျွန်းကို မရောက်ဘူးတဲ့သူမရှိပါဘူး အဲ့လိုပဲ (guam) ကျွန်းတို့(siapan) ကျွန်းတို့ ဆိုတာကလည်း ဂျပန်တွေချည်းပါပဲ။
သူတို့လူမျိူးတွေကိုယ်တိုင် ဂျပန်လူမျိူးခရီးသွားသလားမသွားသလား ဘယ်လေယာဉ်ပျက်ကျ ပျက်ကျ ဂျပန်လူုမျိုးတစ်ယောက်တော့ပါတယ် ဆိုပြီးတောင်ပြောကြတဲ့ အထိပါ။
ကဲ..ကဲ.. ကဲ. ကျွန်မလေရှည်မိနေတာလေး လိုရင်းကိုသွားရအောင်...
ပင်လယ်သွားကြမယ်သူတို့ပုံစံအတိုင်း လက်ကိုင်အိတ်ကို ပါဝါ ချည် မျက်မှန် ကြီးကြီး နဲ့ခြေညှပ်ဖိနပ်ပါးတွေနဲ့ပင်လယ်သွားကြမယ့်သူဆိုတာ လည်း ကြွားချင်ကြသေးကြတယ်လေ
TV ထဲက စစ်တမ်းကောက်တာတွေ အရတော့
မိန်းကလေးတွေ အလှချင်ဆုံး အချိန် နဲ့ အလှပြင်ဆုံး အချိန်က….
ပထမ က သူငယ်ချင်းရဲ့မင်္ဂလာဆောင်တဲ့ 
ဒုတိယ က အပျော်ခရီးတဲ့ 
ဟုတ်လား ပဲ နော်
ရန်ကုန်မှာလည်း ဘုရားဖူးခရီးတို့ပင်လယ်တို့ ဆိုရင် ကောင်မလေးတွေဆိုတာ မိတ်ကပ်အဖွေးသား နဲ့ ပဲ ကိုနော်
ဒီလိုနဲ့ ကျွန်မတို့ အင်တာနေရှင်နယ် တသိုက် ကျားဝင်ကိုက်သလို ညကြီးမင်းကြီးတောင် အလှတွေပြင် ပြီး လေဆိပ်ထဲမှာ ကျွတ်စီ ကျွတ်စီပေါ့လေယဉ်က ည ၁၂နာရီ တိတိမှာထွက်တဲ့ လေယာဉ်ပါ။
အုပ်စုလိုက် မ၀င်ပဲ တယောက်စီ အဆင်ပြေသလို airline counter မှာ check in လုပ်ကြပါတယ်။ ဒါကလည်း အကြောင်းရှိပါတယ် ချောတဲ့လှတဲ့သူနဲ့ထိုင်ရလို ထိုင်ရငြားဆိုတဲ့ ကျွန်မတို့ အုပ်စုရဲ့ညီမျှစွာ တွေးကြတဲ့ ဆန္ဒလေးတွေကြောင့်ပါ………….
အော်…………… ချောချော လှလှတွေအတွက်တော့ စိတ်ကူးယဉ်စရာ ခရီးပေါ့လေ
စိတ်ထဲ တော့ အမေ ရေ သမီးကို ဘာလို့ မည်းမည်းလေးမွေးပေးလိုက်တာလည်း လို့ ပေါ့
အေးလေ အမေကလည်း ဖြူမှ မဖြူရှာတာ……..
မေမေရေ သမီးကို ဘာလို့ နှာတံပေါ်ပေါ်လေးမမွေးပေးတာလည်း လို့ ပေါ့
သူများပိန်ပိန်လေးတွေ အ၀တ်စားလှလှလေးတွေ ၀တ်ရင်ကြည့်ကောင်းချက် သမီးလည်းသူတို့နဲ့တူတူုဝယ်တာပဲ သမီးကြတော့ ဘာလို့ ပါလိမ့်ပေါ့
ကဲ…… ခရီးမစ ရသေးဘူး ကျွန်မတို့အုပ်စု လ၀က ဖြတ်ပြီးတာနဲ့ဈေးစ၀ယ်တော့ တာပေါ့
ကန်ဆိုင်းလေဆိပ်က မိတ်ကပ်ကအတော် ကိုဈေးသက်သာပါတယ် အဲ့ တုန်းကပါ။
သေချာတယ် ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ကျွန်မက လေယဉ်ပေါ်မှာရောင်းတဲ့ duty free စာအုပ်ကို ပြန်သယ်ပီး အမြဲ ဈေးကိုတိုက်ကြည့်တတ်တယ် ( အရင်တုန်းကပေါ့ လေ)
အဲ့မှာပဲ ကျွန်မတို့ ရင်ခုံရမယ့်သူကို စတွေ့တော့တာပါပဲ……..အဟတ်ဟတ်
GUCCIဆိုင်ထဲ ကို ၀င်သွားတဲ့ အရပ်ရှည်ရှည် နဲ့သူက ကိုင်ထားတဲ့ NewZeland လေကြောင်းလိုင်းလက်မှတ်ကို သူ့ပတ်စ်ပို့စ်နဲ့တွဲ ကိုင်ထားတယ် အသားကမဖြူမညို surfing သမားပုံစံကတော့ ပေါက်နေတယ် အော် သူကလည်း ရေလှိုင်းသွားစီးမယ့်သူလား မိုက်တယ်ဟေ့ပေါ့(စိတ်ထဲကပါ)
ချောလည်းချောတယ် အဟိအဟိ ပေါ့ အားလုံး ကိုယ်စီတွေးနေကြသည်။……… (ကျွန်မ မပါနော်)
တကတည်း အစချီနေတာနဲ့ တင်လိုရင်းမရောက်ဘူး ပြောသားပဲ ကျွန်မ က အခုမှ စရေးတတ်ခါစ ပါဆို
ဒီလိုနဲ့ ပေါ့လေယာဉ်ပေါ်ရောက်တော့့ ကိုယ့် ပစ္စည်းတွေ ထည့် ပီးတာနဲ့ 
ထိုင်နေတုန်း အ……. လာ……. လား ………ကျွန်မဘေးက ထိုင်ခုံကိုတည့်တည့်လာနေပါလား စောနက စောနက အရပ်၇ှည်ရှည်ဘောင်းဘီတိုဒူး အတိနဲ့ ကိုကိုချောချော အဲ့လေ ယောင်လို ကျွန်မ မပါပါဘူးဆို ဒင်းတို့ ကဲ နေတာ( ဒင်းတို့ ဆိုတာ ကျွန်မ သူငယ်ချင်းတွေ )
သူက စလို့နှုတ်ဆက်တယ် “ဟယ်လို ဗျူတီ” တဲ့ဘေးကို ကျွန်မ လှည့်ကြည့်လိုက်တယ် ဘယ်သူကို ခေါ်တာပါလိမ့်ပေါ့ ဗျူတီဆိုတော့
အမေ့…လန့်တာနော် ……….ဟယ်……….ဒါဆို နာ့ကို ခေါ်တာပေါ့ အဟွန်းဟွန်း…………..
အင်းစိတ်ကိုလျှော့ စိတ်ကိုလျှော့မဲမဲတူးတူး ရုပ်ဆိုးလေးငါ့ကိုယ် သနားလွန်းလို့ ခေါ်လိုက်တာလား
နာ့ ကိုများ ဘာလည်း ဟယ်လို ဆို ဟယ်လို ပေါ့ ဘာတဲ့ ဗျုတီက ပါလိုက်သေး အော် သူလည်းပဲ ပန်ပန် ဘူးယို ပေါ့ အီးလို အတော် ပြောချင်တာပလား
ကဲကဲ ဇာတ်လမ်းကတော့ စပီး ဟွန်း အော် မေ့သွားလို့(ကျွန်မ မပါ ပါဘူးဆိုမှ)
ဒီလိုနဲ့ ပြုံးပြလိုက် စာအုပ်ဖတ်လိုက် လေယဉ်မယ်လေး အအေးလာပေးရင် ကိုယ့် ကို ယူပေးလိုက် ကိုယ်က အာရိဂတ်တိုး လိုက်နဲ့ ပေါ့
သူ့ ကို စကားမပြောချင်တာနဲ့ စာအုပ်ဖွင့် ဖတ်နေတုန်း သူက ငိုက်ငိုက်လာပါတယ်
ဟွန်း ..သူကလည်းငါ့ ဘက်ကို ငိုက်လာလိုက် တာ မုန်းလိုက်တာ ဇာတ်လမ်းစ ချင်လို့ နေမှာပေါ့ 
သူ့ခမျာ ဘယ်လောက်တောင် ငိုက်လည်းဆို လည်လည်သွားတယ် ဇက်ကြီးက အဟတ်ဟတ်
ကျွန်မလည်းအိပ်ပျော်သွားရော...........ဒီလိုနဲ့လေယာဉ်ကမနက်စာကျွေးဖို့ လုပ်ရှားလာတယ်
ခွိးခွိး ..........................( စိတ်ထဲ ကနေ ရီနေတာ)
ဟွန်း..........................( စိတ်ထဲကနေ ဘာလုပ်ပေးရင်ကောင်းမလည်း)
ကျွန်မ ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ် အားလုံးမနိုးလာခင် လေယာဉ်မယ်လေး မလာခင် ကဲဟယ်...............
ကျွန်မ ရုတ်တရက်လုပ်ရှားလိုက်တယ် သူ လည်းနိုးသွားတယ်ပြီးတော့ မျက်နာကြီးရဲ သွားပြီး ပြောလာတယ် ဒိုးမို အာ၇ိဂတ်တိုးတဲ့ 
အတော်ကို ကြည့် လို့ ကောင်းတဲ့ ဒီလူကြီး တတ်လာတဲ့ ထိပ်ပြောင်နေတဲ့ နေရာလေးတင်အုပ်လို့ ရတဲ့ ဆံပင်တု
အအိပ်လွန်ပီးရွဲ့ စောင်းနေတာကို ကျွန်မ လက်ရဲဇက်ရဲ ပြန်ပြီးခေါင်းပေါ်ပြန်ဖုံးပေးလိုက်တယ်
ကျွန်မလည်းသူ့ ကို့ မကြည့်တော့တာ လေယာဉ်ပေါ်က ဆင်းတဲ့ အထိပဲ
Posted by ကြည်ကြည် at 1:54 AM
evergreen October 18, 2010 at 9:52 PM
စိတ်ထဲ တော့ အမေ ရေ သမီးကို ဘာလို့ မည်းမည်းလေးမွေးပေးလိုက်တာလည်း Same with me :P
meemee October 18, 2010 at 11:35 PM
Moe Cho Thinn October 31, 2010 at 9:41 PM
(ကျမ မပါတာ သေချာသွားပြီ)